IKlabhu yoShishino-Funda ukuRhweba
IQela loShishino Review
N / A IComposit
Uphononongo olugqibeleleyo lwango-2020 lweKlabhu yeShishini
IComposit N / A
Trading Platform yiprojekti
Inani leeasethi 0
Iklabhu yeShishini yinkampani ye-fintech esandula ukumiliselwa ephuhlise iseti ekhethekileyo yezixhobo ezixhobisa amashishini ukuba afezekise ngakumbi. Inkampani izenzele eyayo i-cryptocurrency, isipaji, utshintshiselwano kunye namakhadi ahlawulelwa kwangaphambili. Zonke ezi mveliso kunye neenkonzo zidale indalo eyahlukileyo eya kuthi incede iinkampani nabantu bafezekise ngakumbi ngendlela efanelekileyo. Iimveliso zenkampani bezikhula ngaphezulu kweminyaka emibini.
Izibonelelo neeklabhu zeShishini
Iqaliswe ziingcali ezinamava eminyaka kwicandelo lezemali.
Imiselwe ngumlawuli wezemali waseMalta.
Easy ukusebenzisa Android kunye iOS zokusebenza
Abameli beenkonzo abazinikeleyo.
Yakhiwe ngokhuseleko engqondweni.
Imirhumo encinci yokusebenzisa iqonga.
Iwebhusayithi inokwenziwa ngcono kakhulu.
Inkampani encinci engakhange ivavanywe kwizinga elikhulu.
Ixabiso le-BCT liza kuqhubeka nokuhla lisenyuka.
Ayizamkeli iimali ze-fiat
Ulwazi lweKlabhu yeShishini
I tilegram: https://t.me/Blockchain_Business_Solutions
Inkqubo ye-Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activewallet.business.club
Zeziphi iimveliso ezibonelelwa yiKlabhu yeShishini
Ithimba leklabhu yoshishini
Iklabhu yeShishini yakhiwe kusetyenziswa itekhnoloji ye-blockchain. Njengoko igama libonisa, itekhnoloji evumela ukusetyenziswa kweebhloko ezahlukeneyo ezinxibelelanayo. Ibhlokhi yenziwe ngothotho lwexesha elinesitampu seerekhodi ezingaguqukiyo. Le datha ayikho phantsi kolawulo lomntu. Endaweni yoko, idatha ilawulwa ngabo bonke abasebenzisi kwaye ayinakutshintshwa. Itekhnoloji ye-blockchain yaziwa kakhulu ngendima yayo kwiBitcoin nakwezinye ii-cryptocurrensets. I-Business Club Token (i-BCT) yinxalenye ebalulekileyo ye-Business Club Ecosystem. Yinqobo edibanisa amalungu eklabhu. Ithokheni, egcinwe kwi-Business Club Active Wallet inamandla okwenene okuthenga anazo ezinye iimali. Imali ikwatshintsha isandla ngaphakathi kwendalo.
IKlabhu yeShishini iWallet esebenzayo
I-Wallet yeKlabhu yeShishini sisipaji sedijithali esivumela amalungu kunye nabanini beThishini leKlabhu yeTikiti ukugcina imali zabo. Isipaji, esifumaneka kwiwebhu, i-Android, kunye neenguqulelo ze-iOS zakhelwe ukuqinisekisa ukuba zonke iithokheni zikhuselekile kwaye azinakuphikiswa. Amalungu kwi-ecosystem angasebenzisa iithokheni ze-BCT kwisipaji sabo ukuthenga. Banokwabelana ngeethokheni namanye amalungu kwi-ecosystem.
IKlabhu yeShishini iBlockchain (BCB)
I-Cryptocurrensets iphuhliswa kusetyenziswa itekhnoloji ye-blockchain. I-Business Club Blockchain (i-BCB) yitekhnoloji egunyazisa uphuhliso lweeKhonkco zeKlabhu yeShishini. Lilonke, zizigidi ezingama-720 kuphela zeethokheni zeBCT eziza kwenziwa. Xa kufikelelwe eli nani, itekhnoloji yeBlackchain yeBhizinisi iya kuyeka ukuvelisa amathokheni amaninzi. I-BCT nganye iya kuba nexabiso le- $ 1. Oku kuya kukhokelela ekunyukeni kwexabiso leeTokheni ze-BCT njengoko unikezelo luthins ngelixa imfuno inyuka.
Amakhadi oShishino ahlawulelwa kwangaphambili
IQela loShishino liphuhlile amakhadi ahlawulelwa kwangaphambili ezinceda ukulawula iimali kwisipaji esisebenzayo. Kukho amakhadi amahlanu ahlawulwa kwangaphambili anikwe amandla yiVisa. La makhadi ngala:
I-Space Black Metal-Eli lelona khadi lihlawulelwa kwangaphambili yi-BCT Club. Inesibonda se-BCT se-50,000 BCT, i-5% yokubuyisa imali, umda wokurhoxa i-ATM wama-2,500 50,000 eedola, kunye nebhalansi ephezulu yekhadi eyi- $ XNUMX.
I-Pearl White Metal- Eli likhadi eline-BCT 25,000 BCT, i-4% yokubuyisa imali, umda wokurhoxa i-ATM wama-2,500 25,000 eedola, kunye nemali eseleyo eyi- $ XNUMX.
Isinyithi esenziwe ngegolide esulungekileyo- Eli likhadi elihlawulelweyo elinama-5,000 BCT, imali ebuyiswayo eyi-3%, umda wokurhoxa i-ATM oyi- $ 1,000, kunye nebhalansi ephezulu ye- $ 20,000.
I-Royal Blue Plastic-Eli khadi linendawo ye-BCT ye-1,000 BCT, i-2% yokubuyisa imali, umda wokurhoxa i-ATM ye- $ 1,000, kunye nebhalansi ephezulu ye- $ 15,000.
Igqabi lePlastiki eluhlaza - Eli likhadi lasimahla elinemali ebuyayo eyi-1%, umda wokurhoxa i-ATM wama-250 eedola, kunye nemali eseleyo eyi- $ 15,000
Ilungu leKlabhu yeShishini
Ikhompyuter yelifu iye yaba yinxalenye yendlela aqhuba ngayo amashishini. Yimodeli elungileyo yokuqinisekisa ukusebenza ngokukuko kunye nokuchitha iindleko zokusebenza kweshishini. IQela loShishino liphuhlise inkonzo enomdla yokufaka ilifu evumela abasebenzisi ukuba bagcine amaxwebhu kunye neefayile. Abasebenzisi banokugcina ngaphezulu ukuya kwi-2 terabyte yedatha.
Iklabhu yeShishini kwiNtanethi
I-Business Club Social Network iyimveliso ngaphakathi kwendalo ye-Business Club evumela abasebenzisi ukuba banxibelelane, babelane ngedatha, babhengeze ishishini labo, kwaye bathenge izinto ezininzi. Yonke le ntengiselwano inokugqitywa kusetyenziswa ithokheni ye-BCT.
Utshintsho kwiKlabhu yeShishini
I-Business Club Exchange yimveliso ekulindeleke ukuba iphehlelelwe ngo-2019. Imveliso iya kwenza abanini beToks zeBCT ukuba bathengise kwaye bathenge amathokheni eBCT.
Ujoyina njani iKlabhu yeShishini
Isinyathelo sokuqala sokujoyina iKlabhu yezoShishino kukundwendwela iwebhusayithi. Ngasekunene kwephepha lasekhaya, uya kubona iqhosha lokubhalisa. Landela iqhosha kwaye liza kukuthatha kwiphepha elilandelayo apho kufuneka ufake iinkcukacha zakho. Qinisekisa ukuba ufake iinkcukacha ezichanekileyo. Qiniseka ukuba ufunda imigaqo kunye neemeko zenkampani. Kuba inkampani ikwiintsuku zokuqala, kuya kufuneka unenombolo yomsebenzisi ekubhekiswa kuyo ukuze uqhubeke. Kuya kufuneka emva koko uqinisekise idilesi ye-imeyile ngokunqakraza kwikhonkco elithunyelwe kuwe.
Ungena njani kwiKlabhu yeShishini
Kwiphepha lasekhaya, kukho uphawu lokungena kwicala eliphezulu. Kuya kufuneka ufake idilesi ye-imeyile okanye igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuze uqhubeke. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ekusebenzeni kwenkqubo yokuqinisekiswa kwamanyathelo amabini ukuze uqhubeke. Ngenye indlela, ungangena usebenzisa i Android usetyenziso lweselfowuni. Inkampani ayikaphehleleli uguqulelo lwe-iOS losetyenziso.
Ukuqinisekiswa kweakhawunti yeKlabhu yeShishini
Njengazo zonke iimveliso zezemali, kubalulekile ukuba uqinisekiswe. Ukuqinisekiswa kunceda ukubonisa ubungqina babasebenzisi. Kuyafuneka nangomthetho. Ufumana iakhawunti yakho iqinisekisiwe ngokunqakraza kwikhonkco okanye iqhosha elithunyelwe kuwe. Emva kokubhalisa, uya kucelwa ukuba uthumele umfanekiso wakho wexesha kunye namaxwebhu okuchonga.
Ngaba iKlabhu yeShishini ilawulwa?
IQela leShishini lilawulwa liGunya leeNkonzo zezeMali laseMalta (MFSA). I-MFSA ngomnye wabalawuli bezezimali abahlonitshwayo kwi-European Union. Okwangoku, inkampani ayichazanga ukuba inayo iiofisi eMalta okanye hayi.
Zithini iiNtlawulo eziHlawuliswa yiKlabhu yeShishini?
Iklabhu yeShishini ihlawulisa imali encinci kwiintengiselwano ezenziwe ngaphakathi kwenethiwekhi. Imirhumo yesipaji esebenzayo phakathi kwe-0.3% kunye ne-0.4% kwiakhawunti yakho yonke imihla. Inkampani inexesha leentsuku ezingama-45 'ezithambileyo' kuzo zonke iidipozithi zabathengi bemali. Oku kuthetha ukuba inkampani iya kukuhlawulisa i-15% yemali oyifakileyo ukuba uthatha isigqibo sokurhoxa ngeli xesha losuku oluthambileyo. Okwangoku, inkampani ikwahlawulisa ikhomishini ye-0.25% kuyo yonke intengiselwano eyenziwe kwindalo.
Amalungu kwi-ecosystem angenza imali ngokudlulisela amanye amalungu kwinkampani. Le khomishini ixhomekeke kwisixa somthengi ekubhekiswa kuye kwi-ikhosistim.
Izimali zamkelwe yiKlabhu yeShishini
IQela loShishino lamkele indlela yemali yedijithali. Oku kuthetha ukuba ayizamkeli iimali ze-fiat zedipozithi. Inkampani yamkela ezi mali zilandelayo:
Ungayifaka njani imali kwiKlabhu yeShishini
IQela leShishini alizamkeli iidiphozithi zisebenzisa iindlela zokudlulisa amakhadi, i-PayPal, kunye ne-Skrill. Endaweni yoko, yamkela iimali zedijithali, ezihlala zifakwa kwezinye izipaji.
INkxaso kubathengi yeQela loShishino
Inkxaso yomthengi ibaluleke kakhulu kuwo onke amashishini. Abathengi abanemibuzo bangathumela inkampani i-imeyile okanye banxibelelane nayo ngeendaba zosasazo. Abasebenzisi banokufunda eneenkcukacha ezinemibuzo ebuzwa rhoqo (ii-FAQs) Okwangoku, inkampani inokwenza ngakumbi ukuphucula indlela enxibelelana ngayo nabathengi. Umzekelo, ayinalo iphepha lokunxibelelana. Endaweni yoko, iqhubela phambili umntu ukuba ababhalele umyalezo we-imeyile. Enye ingxaki kukuba iBusiness Club ayikatsho ukuba isekwe phi. Ngelixa kulawulwa eMalta, amalungu eqela adwelisiweyo onke aseSwitzerland. Iwebhusayithi yenkampani ifumaneka kuphela ngesiNgesi.
Ngaba iKlabhu yeShishini yindawo ekhuselekileyo yokutyala imali?
I-Business Club yinkampani encinci eyasungulwa ngo-2020. Ibisephuhlisweni ukusukela nge-2018 kwaye imephu yendlela ibonisa ukuba izakuqhubeka nokuphuhliswa ukuya kuthi ga ngo-2021. Umzekelo, ngelixa inkampani ikhankanyile malunga nabasunguli, khange ichaze ngakumbi malunga nendawo ekhoyo. Kwakhona, utshintshiselwano lwe-BCT alukasungulwa, oko kuthetha ukuba ukuthengisa amathokheni akho e-BCT kunokuba nzima kancinci. Nangona kunjalo, njengazo zonke iinkampani ezincinci, sicebisa ukuba utyale nje inxalenye encinci yemali yakho. Kufuneka uyiqonde ingozi.